LAGOS waxay soo bandhigaysaa jijin loogu talagalay Apple Watch oo qiimihiisu yahay 6.500 Euro | Waxaan ka socdaa mac
Ma ihi qof jecel farxad. Mararka qaarkood waxaan istaagaa bakhaarka dahabka qaaliga ah hortiisa, si aan u arko waxa ay daaqadda ka muujiyeen. Waan fahansanahay in jawharadu ay qurux badan yihiin, qaarna kuwa kale ka badan yihiin, laakiin waxaan wax badan ku qiyaasayaa qiimahooda. Hadana waan is waydiinayaa maxaa ka dhigi kara qofka inuu daaqa noocaas ah ku xidho jijin ama giraan. Dhowr ilbiriqsiyo ka dib, oo markaan arko inaan heli karin caaradda kubbadda, waan joojiyaa ka fikirkeeda oo waan sii wataa socodkayga.
Haddii aad goor dhow yeelato aroos ama dhacdo aad u gaar ah oo aadan rabin inaad ka qayb gasho Apple Watch-kaaga, hadda waad ku labbisan kartaa xoogaa jijin "qaas ah": Jijin Lagos ka soo qaadista Smart Caviar. Laakiin diyaari faylalka, maxaa yeelay qiimaha ayaa "kaliya" ah 6.500 Euros Euro.
The dahabka-dahablaha dahabka-dhamaadka LAGOS ayaa hadda soo bandhigay ururinta cusub ee jijimooyin loogu talagalay Apple Watch loo yaqaan Caviar caqli badan. Dhexdeeda waxaan ka heli karnaa moodello khaas ah sida 18 karat oo jijimaya dahabka oo qiimahoodu ka badan yahay 6.000 Euros.
LAGOS oo caan ku ah naqshadaha kala duwan ee loo yaqaan 'caviar pearl pearl', LAGOS waxay soo saartay Smart Caviar, oo ah jijimadii ugu horeysay ee dahab quruxsan Apple Watch, si loo hagaajiyo muuqaalka Apple Watch, oo kor loogu qaado qaybta «jawharad».
LAGOS waxay leedahay laba jijimooyin cusub oo loogu talagalay Apple Watch. Midka hore waa jijin 18k ayaa kacay dahab iyo bir bir ah. 38-40mm qiimahiisu waa 1.900 Euro, halka 42-44mm uu ku kacayo 2.300 Euros.
Laakiin haddii aysan kuwani ku qancin dhadhankaaga la safeeyey, waxaad haysataa ikhtiyaarka waxyar ka qaalisan oo ah 18-karat oo lacag qalin ah iyo dugaag dahab ah oo dahab ah, oo, sida magacu tilmaamayo, ay ku jiraan dheeman dheeman ah oo jijimmada ah iyo kharashyada «keli ah» 6,500 Euros. Nasiib darrose, ma bixiyaan qiimo dhimis "Black Friday".
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » LAGOS waxay soo bandhigaysaa jijin raaxo ah oo loogu talagalay Apple Watch oo qiimaheedu yahay 6.500 Euros
Apple wuxuu wadaagaa fiidiyowgii ugu horreeyay ee muusikada Schmigadoon